हामी बाँच्न चाहेको सहर- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
वरिपरि रूखहरू हुन्, रंगीचंगी फूूलहरू हुन् । नजिकै पोखरी होस् । त्यस घरका बालबालिकाहरूलाई कस्तो लाग्दो हो ? त्यसो भए राष्ट्रपतिले झैँ सफा कार्पेटमा बस्ने, रंगीचंगी फूूलहरू हेर्ने, चाहेको बेला सफा चौरमा टहल्ने, आवश्यकता आम नागरिकलाई छ कि छैन ?
असार २०, २०७७ घिमिरे युवराज
उनीहरूलाई नसुन, सुरुमा उनीहरूले सुरक्षा दिएजस्तो गर्छन्, तर उनीहरूले बन्दी बनाउँछन् । तिनीहरू तिम्रा सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् । तिनीहरूले तिमीलाई डर देखाउँछन् र, खालीपनमा बाँच्न बाध्य गराउँछन् । –रुमी
बाँच्नु भनेको कति हो ? सास फेरिरहनु भनेको बाँचेको लक्षण हो ? कुनकुन इन्द्रिय वा अंगहरू कति चलाएपछि बाँचेको मानिन्छ ? बचाउने नाममा कतिपय पुँजीवादी देशहरूले रुमीको कविता सम्झाउने गरी मानिसहरूलाई डर देखाए र बन्दी बनाए । नेपाल देशमा पनि त्यस्तै भयो । ८० दिनसम्म देशभरि सरकारी प्रहरीको मोटरसाइकल साइरन बज्यो र खबरदारीको सरकारी माइक पनि घन्कियो । सबै मानिसलाई घरभित्रै बस्न उर्दी गरियो । उनीहरू हाम्रो सुरक्षा गर्न आएका हुन् भन्ने ठान्यौँ र हामीले उनीहरूको कुरा सुन्यौँ । हामीलाई घरभित्र थुन्नका लागि उनीहरूले डर देखाएका थिए । खासमा त्यो उपाय थिएन, शासनको सहजता मात्रै थियो । उतिखेर हामीले सोचेनौँ, शासकले भनेजसरी नै नागरिकहरू कति दिनसम्म बाँच्न सक्छन् ? यस देशका शासकले भने, ‘बाँच्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, यतिखेर अधिकार र स्वतन्त्रता खोज्ने बेला होइन । त्यसैले घरभित्रै बस र बाँच ।’ पूरै सहर खाली गरेर खुला सडकमा उत्सव मनाउँदै हिँडेका शासकहरूले सोचेनन्, यसरी बन्दी जीवन बाँच्नका लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता के–के हुन्छ ?
केही साताअघि यस देशका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा कड्किँदै भने, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नयाँ कार्पेट हाल्दा रिस गर्ने ? राष्ट्रपति कार्यालय वरिपरिका बगैँचा हरेक दिन गोडमेल हुन्छ । सरसफाइ हुन्छ । यस्तो संकटको बेलामा फूल गोडेर बसेको छ सरकार भन्ने ? यो त नियमित काम हो कर्मचारीको । राष्ट्रपतिले भनेर गर्ने हो र ?’ प्रमको विचारलाई समर्थन गर्दै दुई तिहाइ ताली पररर गर्‍यो ।
त्यसो भए बुद्धनगरको कुनै घरमा लकडाउनमा २ महिनासम्म थुनिएका मानिसले आफू बसेको घरको झ्यालबाट हेर्दा ठूलो चौर देखे भने के होला ? अझ त्यो चौर सफा होस् । वरिपरि रूखहरू हुन्, रंगीचंगी फूूलहरू हुन् । नजिकै पोखरी होस् । त्यस घरका बालबालिकाहरूलाई कस्तो लाग्दो हो ? त्यसो भए राष्ट्रपतिले झैँ सफा कार्पेटमा बस्ने, रंगीचंगी फूूलहरू हेर्ने, चाहेको बेला सफा चौरमा टहल्ने, आवश्यकता आम नागरिकलाई छ कि छैन ? नागरिक जीवनका लागि स्वच्छ पर्यावरण ठूलो आवश्यकता हो । त्यसो भए टौदह, गहनापोखरी वा नागपोखरी सिरुटारमा पनि हुनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयको जस्तो बगैँचा विराटनगरमा पनि हुनुपर्छ । तर, पुराना शासकलाई तिनका दरबारबाट धपाएर नयाँ शासक छिरेपछि उही पुराना शासकझैँ विलासी जीवन बिताएर जनताको करमाथि मनोमानी गरेपछि लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालयको चौर र फूलबारी सिँगार्न हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने सरकारले यस देशको समग्र पर्यावरणमा कति बजेट छुट्याएको छ ? बजेटको कुरा छोडौँ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यावरण शब्दको अर्थ कहाँ अटाएको छ ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कार्यालय र निवासअघि खासमा किन पार्क, चौर, फूूलबारी र पोखरी चाहिन्छ ? त्यसो भए आम मानिसहरू बस्ने बस्तीहरूमा पार्क, चौर, फूूलबारी र पोखरी किन चाहिँदैन ?
नेपालगन्ज, गुलरिया, राजापुर, महेन्द्रनगर, डोटी, बुटवाल, जनकपुर वा प्रमकै निर्वाचन क्षेत्र दमकको बीचमा राष्ट्रपति कार्यालयकै जस्तो, सिंहदरबारकै जस्तो वा शीतलनिवासकै जस्तो चौर, फूूलबारी वा पार्क भैदिएको भए यसले आम मानिसको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर गथ्र्यो होला ? आज कोभिड–१९ को बहानामा निम्त्याइएको लकडाउन र नागरिक दबाबमा लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि भौतिक दूरी कायम गरेर दैनिक जीवन चलाउनुपर्ने चुनौतीका बीच यस नगरको कुरूप पर्यावरण निकै दोषी छ । नागरिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अस्पताल र औषधिको मात्रै कुरा होइन पूरै देशको पर्यावरण ठूलो समस्या हो ।
एकातिर ज्यालादारी गरेर जीवन चलाउनुपर्ने मजदुर ठूलो संकटमा छन् । त्यस्तै त्रासदी खान पाइरहेकाको लगालग आत्महत्या हो । घरभित्र हुने यौन र अन्य किसिमको हिंसा हो । सम्झँदै कहाली लाग्ने कुरा छ । अपांगता भएका मानिस छन् । वृद्धवृद्धा छन् । विशेष किसिमका बिरामी छन् । ४ महिनादेखि स्कुल नगएर घरमा थुनिएका विद्यार्थी छन् । यी सबैको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बस्तीको पर्यावरणमा यस नगरले वा कुनै पनि नगरले के भूमिका खेलेको छ ? यदि सास फेरेकोलाई बाँचेको मानिन्छ भने यस नगरमा सहज रूपमा सास फेर्ने खुला ठाउँ खोजिरहेको छु म— एउटा बालकका लागि, वृद्धका लागि, अशक्तका लागि वा आम मानिसका लागि । तर, बातानुकूलित सरकारी घरहरूमा सत्तासीन शासकहरूले यस्तै सुविधा नागरिकहरूलाई पनि चाहिन्छ भन्ने कहिल्यै सोचेनन् ।
अर्थमन्त्रीले गरेको यस वर्षको बजेट भाषणअनुसार, राष्ट्रपति कार्यालयका लागि छुट्याइएको एक वर्षको बजेट हो १६ करोड २१ लाख र उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि ५ करोड २९ लाख । यो गरिब देशको प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि छुट्याइएको बजेट सुन्दा एउटा आम नागरिक मूच्र्छा पर्न सक्छ । त्यो बजेट हो ४ अर्ब २८ करोड ८५ लाख । यी सबै पैसा जनताले तिरेको करबाट त्यहाँसम्म पुग्ने हो । तर, यस किसिमको गुनासोको प्रतिक्रिया वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट कस्तो आउन सक्छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । एउटा उदाहरण छ । केही वर्षअघि बीबीसी नेपाली सेवामा एक पत्रकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग अन्तर्वार्ता लिँदाको एउटा प्रश्न थियो, ‘तपाईंले सर्वहारा वर्गका लागि जनयुद्ध लडेको भन्नुभयो । ठूलो संघर्ष गरेर पनि आउनुभयो । तर, आज आफैँ अति विलासी बन्नुभयो भनिन्छ नि ?’ उत्तरमा पुष्पकमलले भनेका थिए, ‘कस्तो विलासिता ? के अब म नाङ्गै हिँड्नु ?’ सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले त्यस हदसम्मको विलासिता र नाङ्गै बस्नुबीचको दूरी कति फराकिलो हुन्छ नै बिर्सिसकेका हुने रहेछन् । बीचको सामान्य जीवन तिनका लागि बाँकी नरहने रहेछ । स्वस्थ पर्यावरणको प्रक्रिया लामो छ । तर, आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको छ । आज यो संकटको बेला ध्वस्त पर्यावरण झन् प्रस्ट देखिन्छ । बाटोघाटो, टोल, नगरको सफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको बिजोग छ
सरकार क्षमा चाहन्छु, म लकडाउनमा कहिल्यै घरमै बन्दी भइनँ । यस्तो अव्यवस्थित नगरका हामी लकडाउनकै कारणले आर्थिक संकटमा त पर्छौँ नै । झन्झन् शरीर बिगार्दै जान्छौँ । मानसिक रोगी हुँदै जान्छौँ । शरीर र मस्तिष्कको हितका लागि लकडाउनको पहिलो दिनदेखिनै म घरनजिकका डाँडाकाँडा हिँड्न थालेँ । कीर्तिपुरको सेतोदरबारदेखि भक्तपुर दरबार स्क्वायरबीचका दक्षिणपट्टि पर्ने अधिकांश डाँडा हिँडी भ्याएँ । यो सौभाग्य सबैलाई प्राप्त हुँदैन । लकडाउनकै बीचमा हामीले टोलका युवा मिलेर खाली जग्गामा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनायौँ । घर बन्न बाँकी पानी जमेको जमिनमा एक ट्रक माटो पुरेर बनाएको सानो ठाउँ लकडाउन खुल्नेबित्तिकै अचम्मसँग प्रयोग भयो । टोलका ३, ४ वर्षमाथिका बाबुनानीहरू खेल्ने ठाउँ बन्यो । आमाहरू नै छोराछोरी लिएर आउन थाले । त्यसपछि झन् महसुस भयो, फूूलबारी भएको चौर राष्ट्रपतिलाई भन्दा यी मसिना नानीबाबुहरूलाई चाहिएको छ । सहरको साँघुरो कोठा र २ आना जग्गाको पर्खालभित्र थुनिएका सुत्केरी आमाहरूलाई चाहिएको छ । लकडाउनका कारण पहिलेभन्दा झन् बढी भान्साकोठामा थुनिन बाध्य महिलालाई चाहिएको छ । हामी एउटा समस्या समाधानको कुरा गरिरहँदा अरू सारा समस्यालाई भुलिरहेका छौँ, जसले कालान्तरमा झन् ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ ।
ब्रिटिस शासकहरूले आफ्ना स्वशासित देशहरूमा जसरी बस्ती बसाए, त्यो एउटा नमुना थियो । अहिले पनि भारतका धेरै सहरको कलात्मक परिकल्पना र निर्माण नमुना बनेको छ । ब्रिटिस शासनमा बनेका बर्माका धेरै सहर साँच्चै सुन्दर र व्यवस्थित छन् । हामी युरोप र अमेरिकाका सहरको कलात्मकताको कुरा गरेर अघाउँदैनौँ । काठमाडौं उपत्यकाको बस्ती बस्नुको पनि रोचक कथा छ । मन्दिर र ढुंगेधाराको निर्माण, चोक र खुला पटांगिनीको निर्माण । मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडा काटेर बस्ती बसाएको भनिएको यस उर्वर भूमिमा लिच्छवि वंशीहरूले पशुपतिनाथको मन्दिर दिएर गए । मल्ल शासनकाललाई कलाको उर्वर समय मानिन्छ । मूर्तिकला, प्रस्तरकला, साहित्य र रंगमञ्च मल्ल राजाहरूको समयमा सम्पन्न मानिन्छ । शासकहरूको विलासिता अनि रहरले ती ऐतिहासिक कलाकृति र स्थानको निर्माण भयो । उनीहरूले केही थान पोखरी र ढुंगेधारा दिए । जस्तो कि राजा प्रताप मल्लले पुत्रशोक बिर्साउन रानीको नाममा पोखरी बनाइदिए । भीमसेन थापाले धरहरा बनाए । वा मिथिला क्षेत्रमा आम नागरिकहरूले सयौँ पोखरी खनेर छाडे ।
निश्चित योजनाबाट बसेको उतिखेरको बस्तीलाई पुग्ने ढुंगेधारा, खुला चोक र बाटाघाटा थिए । आज बस्ती तन्किएर काठमाडौं उपत्यका घरहरूले भरियो । खुला चौरहरू झन् खुम्चिए । नगरका रूखहरू काटिए । ढुंगेधाराहरू सुके । नगरको आधारभूत आवश्यकता के हो नबुझी नगरपालिका बन्यो । हामी यस्तो नगर सभ्यतामा आइपुग्यौँ, घरसँगै आँगन वा बगैँचा नहुने भयो । घरको छतमा पानी ट्याङ्की राख्नैपर्ने भयो । भान्सा र शौचालयमा धारा जोड्नैपर्ने भयो । तर, पानीचाहिँ अझै बाल्टी र गाग्रीमा थापेर चलाउनुपर्ने भयो । विद्युत् लाइन छँदाछँदै सोलार र चार्ज ब्याट्रीमा खर्च भयो । सिमेन्ट र इँटाले बनेका घरहरू हुँदैमा कुनै बस्ती नगर वा सहरमा परिणत हुँदैन । नगर वा सहरका अति आवश्यक पूर्वाधार र पर्यावरण हुन्छन् । हामी त्यही पूर्वाधार र पर्यावरण नभएको बस्तीमा शासकहरूले भने जसरी बाँच्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । यो यही ‘आधुनिक’ सहर हो, जहाँ ग्यास चुलो र सिलिन्डरमा लगानी गरेर पनि कुनै बेला खाना पकाउन दाउरा खोज्दै हिँडेका थियौँ । ‘अर्बान इकोलोजी एन इन्ट्रोडक्सन’ नामको किताबमा इयान डग्लस र फिलिप जेम्सले लेखेका छन्, ‘उन्नत नगरको पर्यावरणले त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउन विशेष भूमिका हुन्छ ।’
सहर वा नगरझैं गाउँको पर्यावरणलाई पनि ध्यान दिइएको भए गाउँका विद्यालय निकै सुध्रिन्थे । प्राय: सरकारी विद्यालयसँग जमिन प्रशस्त छ । तर, विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक बनाउने वा उत्प्रेरित गर्ने भौतिक पूर्वाधार छैनन् । विद्यालय परिसर फोहोर र कलाहीन छन् । विद्यालयको कलात्मक र स्वच्छ परिसरले विद्यार्थीको सिर्जनशीलता अनि स्वस्थ जीवनमा गतिलो भूमिका खेल्ने थियो । कम पुँजीका निजी विद्यालयहरू अत्यन्तै साँघुरो पर्खालभित्र विद्यार्थी कोच्न बाध्य छन् । पर्यावरण र सिर्जनात्मकताभन्दा कसरी कम खर्चमा धेरै नाफा गर्ने भन्ने स्वार्थ तिनमा जोडिएको छ । हरेक सार्वजनिक ठाउँका लागि चाहिने व्यवस्थित पर्यावरण र खुला ठाउँ कुनै प्राकृतिक विपत्ति, भूकम्प वा कोरोना भाइरसले निम्त्याएको व्यक्तिव्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने स्थितिका लागि अपरिहार्य हो ।
अपरेसन थिएटरमा गीत सुन्न चाहने प्रधानमन्त्री पाएका नागरिक हौँ हामी । उनी कविताप्रेमी र नाटकप्रेमी पनि हुन् । ताक परे उनी नाट्यकलाबारे नलजाई भाषण दिन सक्छन् । तर, मेरो चासो आम मानिससम्म स्वस्थ पर्यावरणसँगै कला कसरी पुग्छ भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीको अपरेसन थिएटरमा झैँ के कोरोना क्वारेन्टाइनमा पनि नर्सहरूले गीत बजाइदिन्छन् ? हप्तौँ हिँडेर घर पुग्नुअघि क्वारेन्टाइनमा राखिएका मानिसको मानसिक स्वास्थ्यका लागि हामी कस्तो वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौँ ? साँच्चै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन सेन्टर भइदिएको भए, त्यहाँ राम्रो शौचालय, स्वस्थ खानाको व्यवस्था हुन्थ्यो । भौतिक दूरी कायम गर्दै चित्रकारहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसका लागि चित्र कोरिरहेका हुन्थे होला । संगीतकार संगीत गरिरहेका हुन्थे होला । यो आर्थिक अभावले निम्त्याएको समस्या होइन । मात्र सोच र उदारताको अभाव हो । सरकारी सुविधामा बसेकाहरूको विलासिताको रोग हो ।
यस वर्षको भाषा एकेडेमीको बजेट १२ करोड २९ लाख छ । संगीत तथा नाटक एकेडेमीका लागि ६ करोड १ लाख छ । त्यसैगरी ललितकला एकेडमीका लागि ४ करोड ८ लाख छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण चैतको सुरु दिनदेखि नै देखिएपछि देशभरि कलाका गतिविधि रोकिए । त्यसैले यी तीनै एकेडेमीहरूमा अघिल्लै वर्षको बजेट बाँकी छ । त्यो पैसा आम मानिसलाई कला र पर्यावरणसँग जोड्ने काममा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । अझै सकिन्छ ।
म कल्पना गर्छु, घरबाट शिल्पी थिएटर जाँदै गर्दा मैले कोटेश्वर, तीनकुने, सिनामंगल वा बत्तीसपुतलीमा मूर्तिकारको कलात्मक काम देखेँ भने ममा कस्तो असर पर्ला ? भौतिक दूरी कायम गरेरै चित्रकारहरू, संगीतकर्मीहरू, नाट्यकर्मीहरूलाई एकेडेमीहरूले डबली र चोकमा ल्याउन सक्छन् । करोडौँ बजेट बोकेर बसेका एकेडेमी वा विकास बोर्डले आम मानिसमा उत्साह भर्न धेरै काम गर्न सक्छन् । चित्र, रंगमञ्च, संगीत, साहित्य र फिल्मको वैकल्पिक प्रयोगबाट मानिसलाई ऊर्जा दिन सकिन्छ । साधन–स्रोतका हिसाबले निजी नाट्य संस्था, स्वतन्त्र संगीतकर्मी, निजी प्रकाशन गृहभन्दा धेरै ठूलो काम एकेडेमीले गर्न सक्थे । नगरको पर्यावरण र आधुनिक कलाले आम नागरिकमा नयाँ तरंग ल्याउन सक्थ्यो । जस्तो कि मेरो छिमेकमा एक हप्ताअघि सुत्केरी भएकी संगीता शर्मा राष्ट्रपतिको सुन्दर बगैँचामा साँझ बच्चा बोकेर टहलिरहेको कल्पना गर्छु । विद्यालय बन्द भएर घरमै थुनिएका दर्जनौं बालबालिका टुँडिखेलमा खेलेको कल्पना गर्छु । मेरा टोलका वृद्धवृद्धाले पाटन दरबार स्क्वायरको डबली वरिपरि छुट्टाछुट्टै बसेर संगीत सुनेको वा नाटक हेरेको कल्पना गर्छु । तर, यस सहरमा एउटा मात्रै टुँडिखेल छ । थोरै मात्र डबली छन् । पार्क र फूलबारी छँदै छैनन् । ती खुला आकाशमुनि गरिने सिर्जनात्मक गतिविधि देशैभरि मृतावस्थामा छ । अस्वस्थ पर्यावरणले मानिस विचलित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि शासकहरू नागरिकलाई नबोल र नसोच, घरमै बस र बाँच भन्छन् । आम मानिसमा बाँच्नु र मर्नुको भेदका लागि उदयप्रकाशको उही चर्चित कविता सम्झन्छु । ‘मरना’ शीर्षकको त्यस कविताले भन्छ—
कुछ नहीँ सोचता ।
कुछ नहीं बोलता ।
मर जाता है । प्रकाशित : असार २०, २०७७ १४:४७